समय दिन नसकेको भन्दै दुई पत्निलाई डिर्भोस दिएका आमिर खान तेस्रो विबाहको तयारीमा छन् ? – Sudur Samaj
समय दिन नसकेको भन्दै दुई पत्निलाई डिर्भोस दिएका आमिर खान तेस्रो विबाहको तयारीमा छन् ?
बलिउडका मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आफ्नो उत्कृष्ट अभिनयका लागि परिचित छन् । उनका हरेक फिल्म ब्लकबस्टर साबित हुन्छन् । चाहे त्यो दंगल होस्, धूम होस्, थ्री इडियट्स होस् वा तारे जमीन पर । उनले यस्ता धेरै राम्रा फिल्म गरेका छन् । जसलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् । यस्तो अवस्थामा कलाकारहरु प्रायः आफ्नो फिल्मका कारण चर्चामा रहन्छन् । तर प्रोफेशनल लाइफसँगै आमिरको पर्सनल लाइफ पनि हेडलाइनमा रहन्छ ।
यसको कारण उनको दुई पटक विवाह र दुवै पटक सम्बन्धविच्छेद भएको हो । तर, उनीहरुको सम्बन्धविच्छेदको कारणले मानिसहरुलाई अचम्ममा पार्छ । आमिरले आफ्नी दोस्रो श्रीमती किरण रावसँग डिभोर्स गर्ने क्रममा एक पोस्ट सेयर गर्दै आफ्ना फ्यानहरूलाई यसबारे जानकारी दिएका थिए । जसमा उनले कामका कारण परिवारलाई समय दिन नसकेको लेखेका छन् । जसका कारण उनी र उनको परिवारबीच दुरी बढ्यो ।
अन्ततः उनीहरुले एकअर्काबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् । यद्यपि, तिनीहरू असल साथीहरू रहनेछन् र आफ्नो बच्चाको हेरचाह गर्नेछन्। यसै क्रममा अभिनेताले पहिलो पत्नी रीना दत्तसँगको सम्बन्ध तोड्ने क्रममा पनि यस्तै कारण दिएका थिए । आमिरको यस्तो व्यवहारबाट उनका फ्यानहरु आक्रोशित छन् । यस्तो विवाह र केही वर्ष सँगै बसेपछि विवाह तोडेका कारण आमिर खानप्रतिको विश्वास गुमेको फ्यानहरुको भनाइ छ । तर, दुवैले सम्बन्धविच्छेदका बेला एउटै कारण भने ।
यस्तो अवस्थामा उनीहरुले पुरानो गल्ती दोहोर्या उने वा जानाजानी गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय आमिर आफ्नो को-स्टार फातिमा सना शेखसँग तेस्रो विवाह गर्ने तयारीमा रहेको खबर पनि आइरहेको छ । यद्यपि, यो पुष्टि भएको छैन। आमिरको वर्कफ्रन्टको कुरा गर्ने हो भने उनी आगामी दिनमा फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ मा देखिनेछन् ।
उनको फिल्म मल्टिस्टार हो । जसमा आमिर खान बाहेक सलमान खान, शाहरुख खान, नागा चैतन्य, करिना कपुर खान, शरमन जोशी, पंकज त्रिपाठी, मोना सिंह जस्ता कलाकारले स्क्रिन सेयर गर्नेछन् । यस फिल्मको रिलिज डेट अगस्ट ११, २०२२ राखिएको छ। उनको फिल्मलाई दर्शकले आतुरताका साथ पर्खिरहेका छन् ।
सलमान खानको नेपाल टुर फेरि हुदैछ क्यान्सिल, विप्लव बन्दैछन् कारण !